DAAWO: Militeri si adag loo tababaray oo Muqdisho lagu soo bandhigay & Wasiirka Gaashaandhiga oo ka hadlay – Xeernews24
DAAWO: Militeri si adag loo tababaray oo Muqdisho lagu soo bandhigay & Wasiirka Gaashaandhiga oo ka hadlay
Ciidamada katirsan militariga Soomaaliya ayaa tababara kor loogu qaadayay aqoontooda loogu soo geba gebeeyey magaalada Muqdisho kuaasi oo isugu jiray sarakiil, saraakiil xigeen iyo kuwo kale.
Waxaa goob joog ka ahaa Wasiirka Difaaca Soomaaliya,saraakiil katirsan ayadoo tababarkasi oo muddo bil ah ka socoday magaalada Muqdisho ay bixinayeen saraakiil Mareykan ah.
General Ibraahim Aadan oo ah Abaanduulaha ciidanka xooga dalka ayaa uga mahadceliyay saraakiisha Mareykanka ah tababarkan ay siiyen cutubyo katirsan ciidanka xooga dalka, oo la barayay sidii ay dalkoodi u difaaci lahaayeen.
HOOS KA DHAGAYSO WASIIRKA GAASHAANDHIGA
Mudane C/rashiid C/laahi oo ah wasiirka Gaashaaindhiga Dowladda Feederaalka Soomaaliya oo ciidankaasi katirsan xooga dalka u soo xidhay tababarka ayaa bogaadiyay in waxyaaboihii ay barteen ay dalka ugu adeegaan.
“Waxaan aaminsanahay in howsha la idin tababaray ay tahay mid dhaxalgal ah,islamarkaana anficidoonta ciidamada xooga dalka,anficidoonto dalka,looguna talagalay wax alaale wixii diwaangelin ah,oo laxisaabtan ah eek u saabsan wax alaale wixii ciidamadu ay leeyihiin in la helidoono xisaab waafi ah,ooboqolka sano ee soo socota qofkii idinka dambeeya uu helikaro recordkaasi, jiilka soo socoda ee soo koraya waa in ay helaan”, Ayuu yidhi wasiirka Difaaca Soomaaliya.
Mareykanka ayaa kamid ah wadamada taageera Soomaaliya aydoo ay soo wehliyaan wadamo kale sida Turkiga Midowga Yurub iyo qaar kamid ah dalalka saaxiibada la ah Soomaaliya waxayna ka caawiyaan dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo dib u dhiska ciidamada.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/07/difaac.png 576 1024 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-07-27 18:08:282017-07-27 18:08:28DAAWO: Militeri si adag loo tababaray oo Muqdisho lagu soo bandhigay & Wasiirka Gaashaandhiga oo ka hadlay
QISADII FIRCOON IYO KHABIIR KU MUSLIMEY. Beesha Ciise Si Adag Uga Cadhootay Hadalkii Abgaalow Kaga Dhawaaqay Boorama...